Soo bandhigida qaabdhismeedka guud ee shaqooyinka runta ah, "shaqooyinka qaawan + +" ee dhalinyarada da'doodu ka yar tahay 26 iyo tijaabada dhulka Reunion
1.1 Waa maxay mabda'a isticmaalka bilaashka ah?
Shaqooyinka bilaashka ah waa qorshe gargaar shaqaaleysiineed oo ujeedadiisu tahay in laga jawaabo sinaan la'aanta qaar ka mid ah muwaadiniinta walaalaheena ah ay la kulmaan: oo leh shahaadooyin u dhigma, da 'iyo waddooyin shaqo, runtii way ku adag tahay dadka deggan Degmooyinka mudnaanta u leh siyaasadda magaalada (QPV).
Mabda'a waa fududahay: shaqooyinka furani waxay kakooban yihiin gargaar lacageed oo lasiiyo shaqo bixiye kasta oo gaar loo leeyahay (shirkad, urur) kaas oo qoraya shaqo doon ama qof dhalinyaro ah oo ay ku xigto howlgalka deegaanka ee degan QPV, qandaraas. muddada aan la cayimin (CDI) ama qandaraas cayiman (CDD) ugu yaraan lix bilood.
Qandaraas joogto ah, kaalmada la bixiyay waxay gaareysaa € 5 sanadkii seddex sano, kana soo horjeedaa ,000 2 sanadkiiba in ka badan labo sano ugu badnaan qandaraaska muddada go'an ee ugu yaraan lix bilood. Intii u dhaxeysay Oktoobar 500, 15 iyo Janaayo 2020, 31, oo ku saabsan qaabeynta geynta "Franc + shaqo", xaddiga ...
Su'aalaha iyo jawaabaha Shaqooyinka Frank July 10th, 2021Tranquillus
READ Baro 10 dariiqo oo lacag looga helo internetka
horeXog-siinta: ma jirto ilaalin shaqaale ah maqnaanshaha anshax xumo dambi oo dhanka shaqada ah
socdaQandaraasyada heshiiska shaqo: Heerka taageerada hoos ugama dhaceyso bilowga sanad dugsiyeedka 2021